ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ယားယံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းနှင့် ကုသနည်း - Chit MayMay
Home Lotaya ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ယားယံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းနှင့် ကုသနည်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ယားယံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းနှင့် ကုသနည်း
မေမေတို့ရေ…ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ဝမ်းဗိုက်ယားယံမှုကို ခံစားရတာက သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကုတ်တဲ့အချိန်မှာ ခဏပဲ သက်သာမှာ ဖြစ်သော်လည်း ကုတ်သင့်လား/မကုတ်သင့်ဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိလာပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဝမ်းဗိုက်ယားယံတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ယားယံတာက ပုံမှန်ပဲလား?
ကြီးထွားလာနေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဟာ အရေပြားဆန့်သွားခြင်းကြောင့် ယားယံမှုဖြစ်တာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ရင်သားတွေ၊ လက်ဝါးတွေနဲ့ ခြေဖုဝါးတွေလည်းယားယံလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ၊ ကိုယ်ဝန်တိုးတတ်လာခြင်းနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ အရေပြားအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ယားယံခြင်းက ဆိုးဝါးလာပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနဲ့ ချက်ချင်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဝမ်းဗိုက်ဧရိယာတစ်ဝိုက် ယားယံနိုင်သလဲ?
ကိုယ်ဝန် ၁၃ပတ်မှ ၂၈ပတ်အကြား ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ ဝမ်းဗိုက်ယားယံမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ပထမ (သို့) တတိယသုံးလပတ်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဘာက ဝမ်းဗိုက်ယားယံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေလဲ?
အနည်းငယ် ယားယံတာက ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက များသောအားဖြင့် ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ကျယ်ပြန့်လာခြင်း- များသောအားဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ယားယံတာက သားအိမ်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြားဆန့်လာခြင်း၊ အစိုဓါတ်မလုံလောက်ခြင်း၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းတို့က ယားယံခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ကုသခြင်းက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊
ဟော်မုန်းထိုးတတ်ခြင်း- ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ အထူးသဖြင့် အီစရိုဂျင်တိုးလာတာက ဝမ်းဗိုက်ကို ယားယံစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ယားယံခြင််းက အန္တရာယ်ရှိသလား?
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဝမ်းဗိုက်ယားယံတာက ပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သော ယားယံခြင်းနှင့်အတူ အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ အဖုအပိန့်များ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်သလဲ?
ဝမ်းဗိုက်နဲ့ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပြင်းထန်စွာ ယားယံပါက
အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းလည်းမရှိ ၊ Sensitive skin လည်းမရှိဘဲ ယားယံပါက
ယားယံမှုက ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံး ပျံ့နှံ့သွားပါက
တတိယသုံးလပတ်မှာ PUPPP (or) ICP ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖုအပိန့်နှင့် ယားယံမှုတွေ ရှိပါက
ဆီးအရောင်ရင့်ပြီး အော့အန်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ စားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ယားယံမှုဖြစ်လာပါက
ယားယံခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ မပတ်သတ်ပါက အိမ်မှာတင် သက်သာအောင် ကုသနိုင်ပါတယ်။
၁။ Baking soda နဲ့ရေချိုးပါ
Baking soda ခွက်တစ်ဝက်ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ စပ်ပြီး သက်သာသွားတဲ့အထိ စိမ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက ယားနာနှင့် အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ရေနဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပြီး ယားယံတဲ့ နေရာတွေမှာ လိမ်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးပြီး မကြာခင်မှာ အသားအရေယားယံလာရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို အသုံးပြုပါ။ ရှားစောင်းအနှစ်က ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ရှားစောင်းအနှစ်အလွှာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင့် အကြောပြတ်တာတွေ၊ ခြစ်ရာတွေကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ယားယံမှုကို သက်သာစေဖို့ ရေအေးနဲ့ စိမ်ထားတဲ့ အဝတ်ဖြင့် ဗိုက်ကို ကပ်ထားပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ ရေချိုးခြင်းအပြင် ဒါကိုလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၄။ Moisturize လိမ်းပါ
ပျော့ပျောင်းပြီး အမွှေးအကြိုင်ကင်းတဲ့ အစိုဓါတ်ထိန်းခရမ်ကို လိမ်းပါ။ မကြာခဏ အသုံးပြုပေးခြင်းဟာ ယားယံမှုကို ယာယီသက်သာစေပါတယ်။
ခြောက်သွေ့မှုနဲ့ ယားယံမှုကို လျော့ပါးစေဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး ဝမ်းဗိုက်ပေါ်မှာ ဆီလိမ်းပေးပါ။ သံလွင်ဆီကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
၆။ Apple cider vinegar
ယားယံနေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်မှာ Apple cider vinegar အချို့လိမ်းတာက ခြောက်သွေ့မှုနှင့် ယားယံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ယားယံမှုကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
ယားယံမှုကို မကာကွယ်နိုင်သော်လည်း ယားယံခြင်းကို ပိုဆိုးရွားလာတာကို လျှော့ချဖို့ (သို့) တားဆီးဖို့အတွက် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့အခါ ရေပူနဲ့ ချိုးတာရှောင်ပါ။ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးပါ။
ဆပ်ပြာ၊ ဂျယ်လ်ကို အမွှေးနံ့ပြင်းတာတွေ မသုံးပါနဲ့။ သူတို့က အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ အရေပြားကို နူးညံ့စေမယ့် ဆပ်ပြာ၊ ရေချိုးဂျယ်လ်ကိုသုံးပါ။
သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ ချည်သားပွပွတွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။ တင်းကျပ်ပြီး စိုစွတ်တဲ့ အဝတ်တွေက ခြောက်သွေ့မှုနဲ့ ယားယံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အရေပြား ခြောက်သွေ့ပြီး ယားယံနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် နေမှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကလည်း ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပေါ်မှာ အဖုအပိန့်တွေကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အသားအရေကို မကြာခဏ အစိုဓါတ်ပေးပါ။ PH လယ်ဗယ်အသင့်တင့်ရှိတဲ့ moisturizer ကောင်းတွေကိုသုံးပါ။
အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အဲကွန်းခန်းထဲမှာ ကြာရှည်မနေပါနဲ့။
တစ်နေ့လျှင်ရေဖန်ခွက် ရှစ်ခွက်မှ ဆယ်ခွက်အထိ သောက်ပါ၊ ရေက ခန္ဓာကိုယ်ရေဓါတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး သင့်အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း ချောမွတ်စေပါတယ်။
Chit Maymay မှ ရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ဆောင်းပါးများကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ Facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Previous articleမေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေးကို ကောင်းမွန်သောနာခံတတ်သူတွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ကြမလဲ
Next articleချစ်မေမေတို့အတွက် အိမ်တွင်းရေးကို အေးချမ်းအောင်ထိန်းသိမ်းနည်း
Mom and Baby185
Nandar Lwin - September 27, 2021 0